သင်သည် ပုဂ္ဂလိက ဂျက်လေယာဉ်တစ်စီးကို အရေးတကြီးလိုအပ်နေပါသလား။ သင်သည် တစ်နေရာရာသို့ လေယာဉ်ဖြင့်ပျံသန်းသွားရန် စီစဉ်နေသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှရှိမည်ကို မသိရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် သင့်အတွက် ပုဂ္ဂလိက လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကို အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါသည်! နောက်ထပ်အနေဖြင့် လေကြောင်းခရီးစဉ်အတွက် ခန့်မှန်းခြေ ဈေးနှုန်းကိုပါ တွက်ချက်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
မည်သည့်နေရာသို့မဆို ပျံသန်းရန် ပုဂ္ဂလိက လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ ရှာဖွေရန် အလွန်ရိုးရှင်းသော ဖောင်(ပုံစံ)တစ်ခုကို အောက်တွင် ဘာသာစကားသုံးမျိုး (အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်နှင့် ရုရှဘာသာဖြင့် သင်တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါဖောင်(ပုံစံ)၏ ဘယ်ဘက်ထိပ် ထောင့်ရှိ သက်ဆိုင်ရာ ချက်ဘောက်စ်ကို ကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်) သင့်လျော်သည့် ဘာသာစကားကို ရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ လေကြောင်းခရီးစဉ်အတွက် အဆင်ပြေသည့် နေ့ရက်၊ အချိန်နှင့်တကွ သင်စတင်ထွက်ခွာမည့် နေရာနှင့် ခရီးဆုံး နေရာများကို ရေးသားစာစီနိုင်ရန် လေးထောင့်ကွက်တစ်ခုလည်းပါရှိသည်။ သင်နှင့်သင့်လျော်သော ခရီးသည်ပမာဏဆံ့ လေယာဉ်တစ်စီးကို အဆိုပါစနစ်မှ ချက်ချင်းရွေးချယ်နိုင်စေရန် သင်နှင့်အတူ လိုက်ပါမည့် လူအရေအတွက်ကိုလည်း ဖော်ပြရမည်။ ဤဖောင်(ပုံစံ)၏ ဘယ်ဘက်ထိပ်ထောင့်တွင် လေကြောင်းခရီးစဉ် အမျိုးအစားတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် မမေ့ပါနှင့်- သင်သည် အသွားခရီးစဉ်တစ်ကြောင်းကို ပျံသန်းနေစဉ်တွင် အဆိုပါ လေယာဉ်ဖြင့် အပြန်ခရီးစဉ်ကို ပြန်လာရန် စဉ်းစားလျှင် (“အသွားအပြန်ခရီးစဉ်” ခလုတ်ကို ကလစ်လုပ်ပြီး အပြန်ခရီးစဉ် နေ့ရက်ကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။) သို့မဟုတ် မြို့ကြီးများစွာသို့ လေကြောင်းခရီးများပျံသန်းနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍သင့်အနေနှင့် အဆိုပါ မြို့ကြီးများစွာသို့ ပျံသန်းသည့်ခရီးစဉ်ကို ရွေးချယ်မည်ဆိုလျှင် နောက်ထပ်ထွက်ခွာနေရာများ အရေအတွက်အရ ခရီးစဉ်၏ ဈေးနှုန်းသည် သိသိသာသာ ပြောင်းလဲသွားမည် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် “ရှာဖွေပါ” ခလုတ်ကို ကလစ်လုပ်ပါ။
ဤစနစ်သည် အသင့်လျော်ဆုံးသော အကြံပြုချက်များကို ပေါင်းစုထားပြီး သင့်အနေနှင့် အကောင်းဆုံးသော ရွေးချယ်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့နောက် တောင်းဆိုမှုကို ရိုးရှင်းစွာ ပေးပို့ရုံသာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သူများမှ သင့်ထံဆက်သွယ်နိုင်ရန် လေကြောင်းခရီးစဉ်၏ ဈေးနှုန်းကို ကလစ်နှိပ်ပြီး အောက်တွင်ပေါ်လာသော ဖောင်(ပုံစံ)တွင် သင်၏ ဆက်သွယ်ရန် အသေးစိတ် အချက်အလက်များကိုဖြည့်သွင်းပါ။ လေယာဉ်နှင့် လေယာဉ်ပေါ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက် မည်သည့်အထူး လိုအပ်ချက်များနှင့် တောင်းဆိုချက်များကို မဆိုလည်း ဖော်ပြနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် သင့်လိုအပ်ချက် ပြည့်မီစေရန် ကြိုးစား ဖြည့်ဆည်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် တောင်းဆိုမှုများကို အချိန်ပြည့် ၂၄ နာရီ/ရက်သတ္တပတ် တစ်ပတ်လုံး လက်ခံနေပြီး သင့်ထံမှ တောင်းဆိုမှုများကိုလည်း ကျွန်ုပ်တို့ စောင့်မျှော်နေပါသည်!
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ မည်သည့်နေရာသို့မဆို (အာတိတ်ဒေသ လေကြောင်းခရီးစဉ်များပင်လျှင်) ပျံသန်းရန် အဆင်သင့်ရှိနေသည့် လေယာဉ်အမျိုးမျိုး အစင်းရေ ၅၀၀၀ ထက် ပိုမိုရှိသည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် သာမန်လေကြောင်းခရီးစဉ်များသာမက သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအဆင့် အားလုံး ပါဝင်သည့်(လေယာဉ်များပေါ်တွင် ကြယ်ငါးပွင့် ဟိုတယ်များပင် တင်ဆောင်ထားသည့်!) ခရီးသည်ဝန်အားအမျိုးမျိုးဆံ့ ပုဂ္ဂလိကဂျက် လေယာဉ်ခရီးစဉ်လက်မှတ်များပါ သင့်အတွက် ကူညီဝန်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ခရီးစဉ်တွင် လေဆိပ်များမရှိသည့် ရောက်ရှိရန်ခက်ခဲသော နေရာများ ပါဝင်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့ AVIAV TM (Cofrance Sarl) ကုမ္ပဏီသည် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို (ပင်လယ်ပြင်ကျယ်ကြီးရှိ သင်၏ အပျော်စီးသင်္ဘောကြီးပေါ်တွင်တောင်မှ) ဆင်းသက်နိုင်သည့် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်သည်။ ဤဖောင် (ပုံစံ)ပေါ်ရှိ သင်၏လိုအပ်ချက်များတွင် ဤအချက်ကို ဖော်ပြရုံသာ သို့မဟုတ် သင့်အနေနှင့် ခရီးလမ်းကြောင်းကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အခါနှင့် ပုဂ္ဂလိက လေယာဉ်ခရီးစဉ်၏ ဈေးနှုန်းကို လေ့လာစိစစ်သည့်အခါတွင် အော်ပရေတာကို တိုက်ရိုက်ပြောရံ
ပုဂ္ဂလိကလေကြောင်းခရီးစဉ်တစ်ခု ဘွတ်ကင်တင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သိလိုသည်များရှိနေသေးပါက ကျွန်ုပ်တို့ထံ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်များကို ဤဝက်ဘ်ဆိုဒ်၏ စာရင်းကဏ္ဍတွင် တင်ပြထားပါသည်။ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချက်တင်ပုံစံဖြင့် ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ +33629961135 ၏ Viber, WhatsApp နှင့်Telegram မက်ဆေ့စ် ဝန်ဆောင်မှုများတွင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
စင်းလုံးငှားလေကြောင်းခရီးစဉ်တစ်ခုကို အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် မည်ကဲ့သို့ ဘွတ်ကင်တင်ရမည်နည်း- မကြာခဏမေးလေ့ရှိသည့်မေးခွန်းများ